Shilalekha » कोरोना कथा : माफ गर कियान कोरोना कथा : माफ गर कियान – Shilalekha
६ श्रावण २०७७, मंगलवार १६:२३
सँगैको छिमेकी भएकोले सधै ऊसँग लुकेर हिँड्न सक्ने कुरो भएन । एक न एक दिन त हामीले उसको मन दुखाउनु नै थियो । सकेसम्म उसको सम्मुख नपर्ने रणनीतिमा लाग्यौं । जति गर्दा पनि सधै उसको नजरबाट छिप्न गाह्रो हुँदै गयो । एक दिन बिहानै कियान मेरो घरको गेटमा आएर कराउन थाल्यो । अंकल, अंकल…. भनेर बारम्बार मलाई बोलाईरह्यो । म भित्र झ्यालको पर्दाबाट लुकेर उसलाई हेरिरहें ।
मसँगको त्यो घटना भएको भोलिपल्ट बिहान कियानलाई जगत बाको गेट हल्लाउँदै गरेको देखेँ । उसले जति गेट हल्लाए पनि जगत बा बाहिर निस्किएनन् । माथिसम्म सुन्ने गरी बा, बा…. भन्दै निकैबेर कराईरह्यो । म मेरो कोठाको पर्दाको चेपबाट नियालिरहेको थिएँ उसका कृयाकलापहरु । धेरैबेर कराउँदा पनि कोहि बाहिर नआएपछि रुँदै रुँदै घरतिर फक्र्याे ।
बिहानको घटना बिर्सने प्रयास गर्दा गर्दै राति एकहुल केटाकेटी पछिपछि लगाएर कियान आईपुग्यो मेरो कोठामा । अकस्मात कोठा भित्र प्रवेश गरेकोले म अत्तालिएँ । कियान रिसले आँखा रातो रातो पार्दै बोल्यो ः “ हामी सानो बच्चाहरुसँग तपाईंहरुले गर्ने व्यवहार यही हो ? मैले तपाईहरुको के बिगारिदिएको थिएँ र तपाईहरु मलाई आफ्नो घरमा पस्न दिनु हुन्न ? पहिले पहिले जस्तै किन बोल्नु हुन्न मसँग ? किन बगैँचामा दौडिन दिनुहुन्न ? किन पोन्डको माछा हेर्न दिनुहुन्न ? किन मायाले गाला चिमोट्नु हुन्न ? किन काँधमा बोकेर हिँड्नुहुन्न ? तपाई मलाई माया गर्नुहुन्न भने अबदेखि म पनि तपाईंहरुसँग बोल्दिन । तपाईहरु जस्तो मान्छेहरुलाई गुड मर्निङ पनि भन्दिन । तपाईहरुको घरमा पनि आउँदिन । अनि………”